192.168.8.1 -Umlawuli wokuNgena
idilesi ye IP 192.168.8.1 yidilesi ye-IP yabucala ngaphakathi kuNxibelelwano lweNdawo yeNgingqi, kuphela ongasebenzisa le dilesi yeIP kwaye ayinakusetyenziswa kwi-Intanethi. Unokusebenzisa le dilesi yeIP 192.168.8.1 yokuvula ipaneli yomlawuli wendlela kunye nokwenza uhlengahlengiso ezimbalwa kuseto lwayo olungagqibekanga. Olunye lotshintsho olunje kubandakanya ukutshintsha iphasiwedi kunye negama lomsebenzisi, useto lwenethiwekhi, ukongeza i-firewall, kunye nokuseta isixhobo.
IP 192.168.8.1 isetyenziselwa ukunxibelelana neenkqubo ezahlukeneyo kwinethiwekhi yabucala. Ikwasetyenziswa ekumiseleni izixhobo zonxibelelwano ngokwazisa inkqubo yokungena.
Qwalasela i-Router nge-192.168.8.1
Emva kokuba ungene kwi-interface ye-router ngo-192.168.8.1Lixesha lokuba utshintshe useto ukuze wazi ukhetho lwakho lokuqala. Iintambo ezinkulu zamanani kunye nezifinyezo zinokubonakala zingenakufikeleleka, kodwa ungaphumla ngokulula usazi ukuba zonke iisetingi zinokuphinda zisethwe kwakhona ngokungagungqi ngokucofa iqhosha. Kodwa kuyanceda ukwazi apho uqala khona; yiyo loo nto eyona nto iphambili ekufuneka uyitshintshe zezi nkcukacha zokungena ngemvume zikhankanywe apha ngasentla:
Khetha imenyu ngokubanzi kuseto
Khetha iphasiwedi yomsebenzisi okanye ukhetho oluchongiweyo
Kufuneka ufumane igama lomsebenzisi kwi-router kwimenyu efanayo ongayitshintsha kwigama lakho lokuqala.
Guqula Idilesi ye-IP Yasekhaya 192.168.8.1
Olunye useto onqwenela ukuluguqula yidilesi ye-IP yendlela, ngokuqhubeka umahluko phakathi kwedilesi ye-IP yoluntu kunye neyasekhaya echazwe ngezantsi. Ukuba utshintsha idilesi ye-IP yendlelaAwuyi kuyazi indlela yokufikelela kwi-router ngo-192.168.8.1, ke kufuneka uqinisekise ukuba uyayikhumbula idilesi yakho yamva nje. Ukutshintsha idilesi:
Ndwendwela imenyu yokuseta okanye ukhetho olunamagama ngokufanayo
Betha kuseto lwenethiwekhi.
Apha ngezantsi kuseto lwe-router, bhala kwidilesi oyithandayo ye-IP
Enye yeedilesi ze-IP ezingagqibekanga yile 192.168.8.1, kodwa ngokungafaniyo 192.168.0.1 or 192.168.1.1 Azikho rhoqo iinkampani ezisebenzisa le dilesi yangaphakathi. Kuya kuba sengqiqweni ukuthi phantse bonke abayisebenzisi. Ngokulula le nto ayivumelani nabo, njengoko benokusebenza okufanayo-kusetyenziswa ukungena kwi-web interface yomzila.
Ukutshintsha igama lenethiwekhi yeWi-Fi
Ngokusebenzisa useto oluguquliweyo, ungaqala ukufumana ukongezwa ngegama lomnatha weWi-Fi eyindawo entle ukuqala. Iseti yesazisi seNkonzo okanye i-SSID ligama elahlula inethiwekhi ye-Wi-Fi yomzila kwabanye abasondeleyo. Igama linokuba yiyo nantoni na oyinqwenelayo ukuba ayicaphukisi. Ngokuzenzekelayo, igama linokuba liqhelekile ukunceda ukwahlula inethiwekhi ekufuneka uyenzile:
Ukutyelela imenyu yokusetha enye into ekhethiweyo enegama
Cofa kukhetho olungenazingcingo.
Bhala kumagama akho omnatha owathandayo ngaphakathi kwebhokisi ye-SSID
Emva kokutshintsha igama leenethiwekhi ze-Wi-Fi, unokulungisa iphasiwedi. Ibhokisi yephasiwedi iya kuba kwimenyu efanayo njengegama lenethiwekhi.
Useto lwentloko luya kukuvumela ukuba ufumane ukhuseleko lomzila olubalulekileyo ukuze uqiniseke ukuba umntu ukhangela umnatha kwinethiwekhi yakho wenza njalo ngokukhuselekileyo. Ukusuka apha, wamkelekile ukufumana ukhetho lwe-router yakho ngakumbi. Ii-routers ezininzi zikhapha useto lwabazali onokuzibekela, kwaye bambalwa abaya kuvumela ukuseta iinethiwekhi ezininzi okanye nayiphi na inkonzo yeVPN.
Okungakumbi kwi-IP 192.168.8.1
192.168.8.1 Oku kubizwa ngokuba lisango, labucala, okanye idilesi ye-IP yendawo ethathwa njengeyona inkulu kwinethiwekhi ye-Wi-Fi. 192.168.8.1 Ifumana esetyenziselwa ukufikelela zombini isikhombisi somgaqo kunye nokuvumela izixhobo ezifanelekileyo ukuba zidibanise nomzila. Ungaqwalasela idilesi ye-IP yomzila wakho njengeBhokisi yePosi yeposi. Zonke iipakeji ozifumana ngeposi ngokuthe ngqo ziye kwiBhokisi yePosi, nangona kunokuba uza kuqokelela, umzila wakho uya kuthi emva koko uthumele iposi kwisixhobo sePC esayifunayo.
Ukuba ungumnini wesixhobo kunye Uluhlu lwe-IP & 192.168.8.1 idilesi engeyiyo, uya kufumana ifestile yokungena kanye xa uyibhalile kwibar yedilesi yesikhangeli. Emva koko ufuna ukusebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Ngexesha elithile ngexesha, kuqhelekile ukuba ube nemicimbi eyahlukeneyo kunye ne-router yakho. Ukuba awukwazi ukudlula kwiscreen sokungena, kukho izinto ezithile ofuna ukuzijonga. Qinisekisa ukuqinisekisa ukuba i-intanethi yakho izinzile kwaye ayitshintshi. Enye inketho kukusebenzisa i-Command Prompt ukuqinisekisa isango elingagqibekanga. Usenokuba usebenzisa idilesi ye-IP engeyiyo ukufikelela kujongano lomsebenzisi. Ukufumana uncedo oluthe kratya, unokuqhagamshelana nomthengisi weintanethi.
Kukho ezinye iimfuno ekufuneka sizilandele ukungena kule dilesi ye-IP & ukwenza uhlengahlengiso oluyimfuneko. Eyona nto ibalulekileyo kukuba kummelwane wenethiwekhi ye-router okanye ungene nje. Esona sithintelo esikhulu malunga nale dilesi ye-IP kukuba ayifumaneki kwi-WWW kwaye ke iyasinyanzela ukuba sibe kwindawo yothungelwano lwe-router ukusondela kujongano lwewebhu. Isikhangeli sethu sewebhu kufuneka sibe yinkimbinkimbi (iGoogle Chrome, iMozilla Firefox, njl.) njengoko le ndlela idinga inkxaso ye-pop-up HTML5.
Ukuba ungumlawuli we-router eyeyedilesi ye-IP 192.168.8.1 emva koko kusetyenziswa idilesi ye-IP 192.168.8.1, ungenza naluphi na utshintsho olufunekayo kwi-router yakho kwaye utshintshe nokuseta okungagqibekanga kwendlela yakho.
Ngaphandle koko, unokwenza okuninzi ukongeza ngale dilesi ye-IP njengokutshintsha amagama abasebenzisi, ipassword, ukulawula useto lwenethiwekhi, ukumiselwa komlilo kunye nokunye okuninzi.
Nazi ezinye zeempawu eziphambili zedilesi ye-IP 192.168.8.1.
Ukutshintsha igama eligqithisiweyo kunye negama lomsebenzisi.
Ukulawula iQoS kunye neeSetingi zenethiwekhi.
Ukuvalwa kunye nokuVimba isiXhobo sokuPhela.
Ukuseta i-Firewall kunye noCwangciso loKhuseleko
Indlela yeNdawo yeWifi.
Unokutshintsha kwaye utshintshe olu seto emva kokuba ungene kwiphepha lewebhu lomlawuli wendlela yakho eyile dilesi ye-IP 192.168.8.1. Ukungena kwidilesi ye-IP 192.168.8.1, kufuneka ubhale kwidilesi ye-IP yedilesi http://192.168.8.1 kwebrawuza yakho okanye ucofe ukufikelela kwinkxaso yomlawuli wendlela yakho kwidilesi ye-IP 192.168.8.1.
Kuya kufuneka uqwalasele kwakhona i-router yakho ukuze isetyenziswe ngakumbi. Kukho iisetingi ezininzi onokuthi uzimise kwiqela lolawulo le-router. Unokufunda ngakumbi kwi-interface yewebhu.
Uluhlu lwegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha le 192.168.8.1
HUAWEI I-TMAR # HWMT8007079 (ayikho)
iindidi ii-router Ushiye uluvo
Page1 Page2 ... Page8 Okulandelayo →
Uluhlu olungagqibekanga lomzila wegama
Uluhlu lwee-Idilesi ze-IP
Ukungena kwe-2wire Router
3Com umzila Login
3JTech umzila Login
Arris umzila Login
Ukungena kweAsus Router
Ukungena kweBelkin Router
Ukungena kweCisco Router
Comtrend umzila Login
D-ikhonkco umzila Login
I-Linksys Router yokuNgena
Ukungena kweNzira yeNetgear
Ukungena kwe-Router ye-TP-Ikhonkco
Ukungena kwendlela ye-TRENDnet
Ukungena kweZyXEL Router